Sideebay soomaaliya iyo soomaaliland ugu heshiin karaan saami qaybsiga hawada labada dal ?
Sunday October 08, 2017 - 08:19:01 in Maqaallo by Wariye Tiriko
Waxaynu ogsoonayahay in soomaaliya 1960kii ku andacootey in dalka waxloogu qaybiyo 8 gobol oo laba kamid ahi waqooyi yihiin , lix kamid ahina soomaaliya yihiin taasoo ahayd mid reer soomaaliland lagu khiyaameeyey wakhtigaas si xisaabtu u noqoto 4/3 oo macneheedu yahay inay afar meelood marka loo qaybiyo sadex iyagu qaataan halka reer waqooyi qaadanayaan hal keliya . Waxaan kaloo ogsoonahay in shirkii ceel dooreed ee lagu go, aan saday waxa loogu yeedho 4.5 soomaaliland inta la qaybiyey madixii keliyahaa ee ku jireyna la qoray aadaris laguna daray dad reerkoonfur ah si loogala dagaalamo mustaqbalka inaanay cod buuxa yeelan siyaasiyan iyo iqtisaadiyan midna . Waxaan kaloo ogsoonayahay inay soomaaliya burburisey wadahadalkii labada dal kaasoo ay doonayso inay soomaaliland ku cadaadiso inay ka tanaasusho waxyaabo badan oo mustaqbalka reerkoonfurka laf dhuun gashay ku noqonaaya marka siyaasad laysku hor fadhiisto ayna doonayaan sidii ay uga hortegi lahayd inay wax nowdaan . Dhamaan waxyaabahaasu waxay ka turjumayaan inaanay reerkoonfuri dagaal buuxa kula jirto soomaaliland siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaanba si aanay madaxa kor u qaadin . Hadaba waxaa la bilaabay gudi farsamona loo saaray wadahadalkii hawada ee labada dal si loogalasoo wareego hayadaha qaramada midoobey ee gacanta ku haya , waxaase meesha taala oo aan laysku mari doonin qaybsiga dhaqaalaha kasoo baxa hawada oo noqon doonta meesha sartu ka qudhmayso . Soomaaliya markeeda hore uma aqoonsana soomaaliland dawlad madax banaan oo ay laba is leeg wax u qaybsanayaan ee waxay u qabtaa dawlad goboleed ka cadhooday oo ay xukunto sida ay marwalba ka dhawaajiso, sidaasi darteed waxay miiska soo dhigayaan arimahan hoosku qoran si mid ahaan loo doorto isla markaana soomaaliland marlabaad loogu khiyaamayn lahaa.
1: in labada dal waxku qaybsadaan dawlad goboleedyo soomaalilandna tahay mid lamid ah .
2: in waxlagu qaybsado hanaanka 4.5 ee beelaha soomaaliya ku heshiiyeen
3: in waxlagu qaybsado 8 sideedii gobol ee lixdankii wax lagu qaybsaday
4:in waxlagu qaybsado 16 kii gobol ee dawladii siyaad bare ka tagtay
5: in wax lagu qaybsado inta madaar ee dalka ku taal .
Taasoo noqonaysa inaad sheegato 6 madaar iyana sheegtaan 30 madaar ama waxku dhow oo dhamaanba soomaaliland ladoonayo in cidla lagu diro iyo arimo kale oo lamid ah oo ay faaiido ku doonayaan . Hadaba soomaaliland waa inay ka digtoonaataa dabinkasta oo soomaaliland loo dhigaayo isticmaashaana awoodeeda dawladnimo oo aanay marnaba gorgortan ka gelin wax ay xaq u leedahay inuu wadamo kale kala dhexeeyo sidii lixdankii loogu khiyaameeyey . Isla markaa aanay soomaaliland marnaba muujin wax tanaasulaad ah oo danbe maadaama tanaasulaadkii soomaali doonka ahaa ee lixdankii maanta halkaa inala marayo welina aynaan garanayn waxaynu ku danbayn doono .
Qore:siyaasi madax banaan